Top 12 Sababo aad xididka Your Android Phone
Sida loo xididka Samsung Galaxy Ace S5830i
Si rujin ama aan si rujin? Taasi waa su'aal ah oo aad wareeriya laga yaabaa in badan. Afjarno telefoonka aad Android ku siinayaa mudnaan ku qabsan buuxda gacanta dhinac kasta oo aad nolosha Android. Ka dib markii ay soo afjarno, aad dedejin kartaa Android phone, hagaajiyo nolosha batari, oo wuxuu ku raaxaysan barnaamijyadooda u baahan in ay helaan xididka, iyo in ka badan. Halkan, waxaan ku qor baxay hogaanka 12 sababaha asalka u Android phone. Waxaa akhri ka dibna Poll ku saabsan sababaha dhamaadka maqaalka.
Sababta Bloatware 1. Ka saar
Phone kasta Android uu leeyahay badan bloatware preinstalled aan loo baahnayn. Bloatware Kuwani daadi noloshaada batteriga iyo meel qashinka ee xasuusta telefoonka. Dareen xumaaday saabsan bloatware iyo doonayaa inuu iyaga ka dhaqaajiyo? Nasiib darro, bloatware kuwani waa irremovable iyo waxba ma samayn kartaan haddii aad ka rujin telefoonka aad Android. Marka soo afjarno, waxaad tahay inay awoodaan inay si buuxda u kaxeeyo telefoonka aad Android.
Sababta 2. Speed ​​Up Your Phone Android inay Qabtaan si dhakhso ah
Waxaad samayn kartaa waxyaabo badan si kor loogu qaado telefoonka aad Android aan soo afjarno, sida rakibi MobileGo.apk file in nadiifinta maylka adag oo file junk. Si kastaba ha ahaatee, marka telefoonka aad Android habaysan, waxaad leedahay awood ay ku sameeyaan dheeraad ah si kor loogu qaado wax-qabadka. Waxaad meesha ka saari kartaa bloatware rabin, qoboobaha Chine oo ay maamulaan ee asalka ah si toos ah. Ka sokow, laguu suurogeliyo in lagu furo caddaymaha qalabka qaar ka mid ah inay iska hardware si wanaagsan.
Sababta 3. Ku raaxayso Apps in baahan Root Access
Waxaa tan oo Chine qabow ee Google tahay Play Store, laakiin dhammaantiin ma aha iyaga ka mid ah waxaa laga heli karaa telefoonka aad Android. Taasi waa sababtoo ah barnaamijyadooda qaar ka mid ah waxaa lagu hor istaagay manufactures ama sidayaal. Sida kaliya ee loo isticmaalo waa in la rujin telefoonka aad Android.
Sababaha 4. Samee gurmad ah Full for Your Android Phone
Thanks to Android nooca furan, aad leedahay fududahay in content badbaadiyey kaarka SD ka helaan. Taasi waa sababta aad awooddo si fudud gurmad music, sawiro, videos, document files, iyo xitaa xiriirrada ka card SD. Si kastaba ha ahaatee, waa ka fog ku filan. Marka aad u cusboonaynta in phone cusub Android ama sameeyo dib warshad, waa in aad sidoo kale doonayaan in ay xogta app app iyo gurmad mustaqbalka la isticmaalayo. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah barnaamijyadooda gurmad cabsi badan, sida Titanium, xaddidan yihiin ee telefoonada Android rujin.
Sababaha 5. Ku rakib Latest Version Android
Mar kasta oo nooca ugu dambeeya ee Android (sida Android 5.0) ka soo baxo, waxaa kuu soo qaababka cusub, iyo hagaajinaysaa waayo-aragnimo user. Si kastaba ha ahaatee, nooca ugu dambeeya uu yahay kaliya diyaar u ah waxa qasdigiisu xadidan telefoonada Android, sida Google Taxanaha Nexus. Inta badan telefoonada Android caadiga ah oo kaliya ay ka tageen, haddii hal maalin saaraha ka dhigaysa isbedel qaar ka mid ah oo ku siinayaa awood u leeyahay inuu u sameeyo. Waa adag tahay in la sheego marka ay soo. Sidaa darteed, in ay mid ka mid ah hore si ay u isticmaalaan Android version ugu dambeeyay ee la telefoonka caadiga ah aad, waxba ma ahan balse waa rujin aad samayn karto.
Sababta 6. Block Xayaysiis inay Play Apps muuqan
Khaati ka taagan xayeysiis u dhaca si joogto ah in laga daadiyo aad jeceshahay, oo aad rabto inaad iyaga oo dhan xiri? Waa wax aan macquul aheyn inuu horjoogsado xayeysiis in barnaamijyadooda haddii telefoonka aad Android habaysan. Marka soo afjarno, waxaad ku rakiban kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda add-free, sida AdFree, si loo joojiyo xayaysiinta oo dhan inuu u ciyaaro barnaamijyadooda aad jeceshahay muuqan.
Sababta 7. Hagaajinta Battery Life
Sida aan kor ku soo sheegay, soo saarayaasha iyo sidayaal dhigay preinstall badan laakiin barnaamijyadooda aan loo baahnayn telefoonka aad Android. Chine kuwo ay batari asalka iyo shubeyso. Si aad u badbaadin iyo in la wanaajiyo nolosha batari, iyadoo la isticmaalayo ROM caadadii waa doorashada weyn. Si aad u samee, afjarno phone Android waa talaabada ugu horeysa waa in aad qaadato.
Sababta 8. Flash Custom ROM ah
Marka telefoonka aad Android habaysan, aad awoodo in lagu furo bootloader u iftiimiyo ROM caado. Shidista ROM caado badan oo ka mid ah faa'iidooyinka aad u soo Bixiyaa. Waxaa baddasha habka ay aad u isticmaasho telefoonka aad Android. Tusaale ahaan, la ROM caado, waxaad ku rakiban kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda ad-free si loo horumariyo nolosha batari, cusboonaynta qoraalkii dambe ee Android inay telefoonka aad Android oo aan weli u leeyihiin.
Sababta 9. tayadoodii nidaamka
On phone Android aad rujin, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan si ay u tayadoodii nidaamka. Folder noocyada 'waxa uu ku yaalaa / nidaamka / noocyada. Marka aad u helaan xidid, waxaad ka bixi kartaa internet font aad jeceshahay oo halkan beddelo. Ka sokow, in / nidaamka / qaabka badbaadin faylasha qaar ka mid ah oo la bedeli karaa si ay u tayadoodii nidaamka, sida bandhigay boqolkiiba batari, isticmaali xarunta gaadhsiin hufan, iyo in ka badan.
Sababta 10. Ku rakib Apps on SD Card fasaxaysa Space
Sida caadiga ah, barnaamijyadooda rakiban yihiin ee xasuusta telefoonka ee telefoonka aad Android ah. Intii xusuusta phone waa xadidan tahay. Haddii aad barnaamijyadooda ku rakiban ordi ka mid ah xasuusta telefoonka aad, aad telefoon noqdo mid gaabis ah. Si aad u fogaado, afjarno waa hab fiican oo aad u. By soo afjarno telefoonka aad Android, you'e awoodaan si loo soo dajiyo barnaamijyadooda kaarka SD oo bilaash ah ilaa meel xusuusta telefoonka.
Sababta 11. Isticmaal ay ciyaareyso ay maamusha inuu u ciyaaro Games ee Android Phone
Ma suurto gal ah inay ku ciyaaraan barnaamijyadooda ciyaarta telefoonka aad Android adigoo isticmaalaya xukuma ciyaaraha ah? Haa, dabcan. Waxaad si fudud ku xidhi kartaa qofka xukuma ciyaaraha si ay telefoonka aad rujin Android u ciyaaraha wirelessly la Bluetooth ciyaaro. Read more ku saabsan sida loo sameeyo.
Sababta 12. Sida runta ah ee aad Android Phone
Sababta ugu danbeysay ee si rujin Android Waxaan doonayaa inaan u yahay in la heli xidid, aad tahay qofka iska leh oo keliya ee telefoonka aad Android. Sababtoo ah Sidayaasha iyo saarayaasha had iyo jeer in ay isku dayaan in ay gacanta ku telefoonka aad Android ay ku rakibidda barnaamijyadooda preinstalled. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la helayo helaan xididka, aad xannibi karo xidhiidhka ka dhexeeya telefoonka aad Android oo sidayaal iyo soo saarayaasha, iyo run ahaantii leedahay telefoonka aad Android.
Tus Opinion by cod on Mawduuca hoos ku qoran